Hurumende yeMubatanidzwa Yoongororwa Mashandiro Ayo
Hurumende yemubatanidzwa iri kutarisirwa kusvitsa mazuva zana iri muhofisi svondo rinotevera. Izvi zvinotevera chibvumirano chekuvaka hurumende yemubatanidzwa pakati pemutungamiri weZanu-PF, VaRobert Mugabe, nemutungamiri weMDC, VaMorgan Tsvangirai, pamwe nemutungamiri wechimwe chikwata chidiki cheMDC, VaArthur Mutambara.
Pasati paitwa chibvumirano ichi, hupfumi hwenyika hwange hwaita mamvemve, vanhu vachipondana, kutorerana midziyo uye vamwe vachipambwa nemapurisa nevesangano revasori. Chinangwa chehurumende iyi chaiva chekuvandudza mitemo uye hupfumi hwenyika.
Vamwe vanoti vari kuona zvakawanda zviri kuchinja kubva pakagadzwa hurumende yemubatanidzwa iyi. Asi vamwe vanoti zvikoni zvikoni, mimba haibvi negosoro, zvinhu hazvifi zvakachinja.
NeChitatu, hurumende yakaparura hurongwa hwemazuva zana hwekutsvaga nzira dzekuvandudza hupfumi hwenyika kuitira kuti munyika muve nemabasa. Zimbabwe iri kutarisira rubatsiro rwemari kubva kunze kwenyika, sezvo iyo yega pasina chainokwanisa kuita.
Blessing Zulu weStudio7 akaita hurukuro nenyazvi munyaya dzezvehupfumi, VaProsper Chitambara, avo vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, pamwe naVaDewa Mavhinga, gweta uye vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Hurukuro naVaProsper Chitambara naVaDewa Mavhinga